Kusuka kokhokho base-Afrika baye “kosanta abangamaKristu” - Afrikhepri Fondation
Kusukela okhokho base-Afrika ukuya "abangcwele abangamaKristu"
Isithombe: AmaKhristu enza imicikilisho ngesigaxa (sikadayi) sikakhokho (ambiza ngokuthi "ungcwele")
DKwingokomoya lase-Afrika sihlonipha okhokho bethu. Eqinisweni, okhokho ababona abafileyo (ngoba lokho okubizwa ngokuthi ukufa akunakuba khona phakathi kwama-Afrika). Ngokomoya lase-Afrika, impilo ngemuva kokufa ikhona. Ngakho-ke idlozi liyisidalwa esingafanga empeleni, kodwa esivele sashintsha isimo (kusuka esimweni somzimba esibonakala kubo bonke ukuya esimweni esingokomoya) emva kokufa (okuwukuphela kwendabuko evela kuleli zwe lomzimba kuya ezweni lapho uMdali ekhona khona) futhi emva kokulungiswa nokucwengulwa emva kokufa (emva kokuhlolwa kwesahlulelo saphezulu).
Okhokho bangomunye nomdali futhi ngubani abakhulumeli bethu (abashayeli bendodana) naye. Ngakho-ke okhokho abaphilayo abavusiwe ababuyele esibelethweni somdali ngemuva kwalokhu okulandelayo. Njengombana okhokho abangakafi kodwana abahlala ebudlelwaneni beenkolo ngaphesheya, abantu base-Afrika benza amasiko nemikhosi ukukhuluma nabo, ukuthatha iindaba zabo, namtjhana bazitjhelele bona babancengele womdali.
Uma kunemibuthano emikhulu yomndeni noma izinqumo ezinkulu zomndeni, njll. Okhokho bemindeni yomndeni bayacelwa ukuba bathathe ubufakazi bokuhlangana komndeni, ukuzalwa, njll. Sibuza imibono yabo, sibabonisana nabo, noma baceliwe ukuba banxuse umndeni nomdali, njll. Ngezinye izikhathi ukwenza lezi mikhosi, ngezinye izikhathi izinto (izinto ezazingezomuntu oshonile ngesikhathi sokuphila kwakhe), noma izingxenye zamathambo akhe (i-skull, amathambo, njll) okuyigugu emndenini.
Abantu baseYurophu banikeze lezi zindlela igama elithi "inkolo yamadlozi" noma "amasonto abafileyo", adonsa yonke le mikhuba.
Futhi nokho ebuKristwini, labo abangamaKristu abababiza ngokuthi abangcwele, lokho kusho ukuthi uSanta Paul, uSanta Peter, uSanta Louis, uSanta Joan wase-Arc, uSanta Rita, noma uSanta Teresa woMntwana uJesu, njll. .. Akusibo yini okhokho babo ababephila sebeshonile futhi abababheka njengabedluliselwe kwabangaphezulu, futhi babathandazela neNkosi? Ngabe laba abangcwele ababona yini labo ababacelayo noma ababuyekeza ngokwenza imikhosi yokudumisa, abantu abasha, ama-novenas, njll.
Lokho ama-Afrika akubiza ngokuthi amadlozi yilokho amaKristu akubiza ngokuthi abangcwele !!
Kodwa uma umuntu wase-Afrika enza izinkambiso ezinjengalezi, esebenzisa ukhokho wakhe (isibonelo, ugogo wakhe isibonelo) usebenzisa i-cranium (ehambisana nayo) yalesi sikhokho ukuze enze imikhosi, wonke umuntu uzokhala ngokuzenzekelayo: "I-Diablerie! "," Witchcraft !! "," USathaneism !! "Etc ..
Njengoba ubona kulesi sithombe, amaKristu enza imikhosi efanayo kubokhokho babo (abawabiza ngokuthi abangcwele) ngokugcina iziqu zabo (amathambo, ama-skulls) njalonjalo. ukwenza amasiko. Kodwa uma benza lokhu kungani kungabikho oshiwo ukuthi uyisathane, noma uSathane, noma ubuqili, kodwa "umkhosi ongcwele nomngcwele weNkosi"?
Njengoba singabona, izinkolo okuthiwa zivulwe ziye zafakaza ngokomoya okhokho bethu ngokuyikhwelisa. Ngakho-ke lezi zifundo, ezibhekwa njengamademon kanye nobuthakathi lapho abantu base-Afrika beziqhuba, babe yizinkonzo ezingcwele futhi ezingcwele lapho le miyambo efanayo ifakwa futhi iqhutshwa ezinkolweni okuthiwa zidalulwe !!!
Isithombe: AmaKhristu enza imicikilisho ngesigaxa (sikadayi) sikakhokho (ambiza ngokuthi “ungcwele”)
3 okusha kusuka ku-15,20 €
kusukela ngo-Agasti 2, 2020 10:52
Usuke usabela"Kusuka kokhokho base-Afrika kuya" kosanta abangamaKristu ... " Imizuzwana embalwa edlule
Ukufundwa kwezinkanyezi kwase-Afrika - UCatherine Hémel
Ukuxhumana Kaphezulu - UDkt Melvin Morse
ECongo, indaba - UDavid Van Reybrouck
Afrikhepri Foundation on Hlanza ikhaya lakho: Ukucindezela kwamandla amabi: "Ungahlanza kanjani ikhaya lakho futhi ususe amandla angalungile." Jul 30, 09:43
Ngingathanda imibono yakho, ngicela uphawulex